Otu afọ ọzọ apụl nke Apple Stores nwere ntụpọ uhie | Esi m mac
A mara Apple mgbe niile maka inye nkwado na-enweghị atụ maka ịlụ ọgụ megide AIDS. Companylọ ọrụ Cupertino nwere ọtụtụ ngwaahịa a na-akpọ RED, ọnụ ahịa zuru oke nke ngwaahịa ndị a, ọkachasị Beats brand case and headphones. Ezubere ya maka òtù dị iche iche na-alụ ọgụ iji kpochapụ ọrịa a. Mana ọ bụghị naanị na-ere ikpe, kamakwa site n'oge ruo n'oge ha na-ewepụta ngwaọrụ dị egwu emere maka ebumnuche a, nke a na-ere ahịa iji weta ego karịa na mkpọsa ahụ. Kwa afọ na AIDSbọchị Ọrịa Ọrịa ,wa, Apple na-acha apụl n'ụlọ ahịa ya na-acha uhie uhie.
Ma obughi so Apple na emekota n'uzo di otua, Apple genye kwa dolla maka ahia obula emere na. A na-eji Storelọ Ahịa Apple akwụ ụgwọ na Apple Pay. N'ụbọchị ndị a na ruo December 6, na Storelọ Ahịa anyị nwere ike ịchọta a pụrụ iche ngalaba ebe anyị na-ahụ ụfọdụ ngwa na-emekọ ihe na mkpọsa a n'etiti nke anyị hụrụ Best Fiends, Boom Beach, Nsogbu nke Clans, Candy Crush Jelly Saga, Farm Heroes Saga, PewDiePie's Tuber Simulator, Hay Day, Plants vs. Ndị Zombies Heroes… na ọnụ ahịa ahịa ha ga-ejikwa maka nke a. Na mgbakwunye, ọ ga-enyekwa otu nde dollar maka mkpọsa ahụ.
Apple abanyela nkwekọrịta ya na Bank of America iji nye onyinye otu nde dollar site na azụmahịa niile ejiri kaadị kredit ya zụta ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ dabere na Cupertino. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe ọzọ, ika Product Red abụghị naanị nke AppleKama nke ahụ, ọ bụ njikọ nke ụlọ ọrụ mejupụtara American Express, Converse, Motorola, Gap, Emporio Armani, Hallmark, Microsoft na Dell. Ego niile ewepụtara site na nke a na-aga Global Fund iji lụso ọrịa AIDS, ụkwara nta na ịba ọgụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Otu afọ ọzọ apụl nke ụlọ ahịa Apple na-acha ọbara ọbara
Ngwa kachasị mma iji jikwaa oge gị ma rụpụta ọrụ karịa (II)